April 2011 ~ ဘာလဲဟဲ့ ဒီမိုကရေစီ
Myanmar Travel Asia
သတင်းအစုံအလင်မှာ.....ဗမာပြည်၏ ဒီမိုကရေစီ အရေးကို ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန် ဆောင်ရွက်နေသော ဒေါ်ညုခေါ်(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)သည်
အတိုက်အခံတို့ သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်မှ ကလေးစစ်သားများသုံစွဲနေပါသည်ဟု နိုင်ငံတကာတွင်ဝါဒဖြန့်နေပါသော်လဲ သောင်းကျန်းသူများဘက်မှ ဤကဲ့သို့ သော ကလေးသူငယ်များအားစစ်တိုက်ခိုင်းခြင်းကို ထောက်ခံကြ ထောက်ပံ့ကြေးပေးနေကြသည်ကို ကြည့်၍၄င်းတို့ ၏မူမမှန်သော အယူဝါဒများကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ မြင်နိုင်ပါသည်။
ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားJust Do Itဒေါ်လာစားများအဖွဲ့ 
၂၀၁၁ အစောပိုင်းကာလများတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် ဂယက်ရိုက်ခတ်နေတာကတော့ Just Do It ဟု မတန်မရာနာမည်ပေးထားသော ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်စားအဖွဲ့ သစ်တခု ဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့ အဖွဲ့ သည် အွန်လိုင်းပေါ်တတ်တတ်ချင်းဆင်ဖမ်းမည်ကျားဖမ်းမည်ဟုပြောပီး ပုရွက်ဆိတ် တကောင်ပင် အဖြစ်ရှိအောင်မဖမ်းနိုင်ပဲ တောင်စဉ်ရေမရလျှောက်ပြောနေကြတာ စာဖတ်သူအနေဖြင့် ရုတ်တရက်သာဖတ်မိပါက မြန်မာနိုင်ငံကြီး တွင် မက်လ၁၃ရက်နေ့ တွင် လူထုအုံကြွမှုကြီးဖြစ်ပီး စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ယင်းသတင်းကြောင့်ကျွန်တော် မောင်ကျော်သူအောင်ပင်လျှင် နှစ်ရက်ခန့် အွန်လိုင်းမတတ်ရဲခဲ့ပါ။သို့ ရတွင် မက်လ၁၃ရက်နေ့ ကျော်သွားသည့်သကာလ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာမှထူးခြားမှုတစုံတရာမဖြစ်ခဲ့ပဲ ထုံးစံအတိုင်းဗိုလ်နေမြဲ ကျားနေမြဲသာ အေးအေးလူလူပင်ဖြစ်ပါသည်။သို့ ရတွင် Just Do It အဖွဲ့ဝင်များမှ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကို မေးရာ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူမှ အတိတ်မေ့သလိုလို ရွှေပျောက်သလိုလိုနှင့် အထက်ပါပုံအတိုင်း ဘူးခံငြင်းကာ ဘယ်နေ့ တော်လှန်ရေးစမလဲဟု နောက်လိုက်ငယ်သားများကို ပြန်မေးနေရခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို မ
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အင်တာနတ်မှတဆင့်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ထိုင်ပီး စောက်တင်းပြောနေသော မဗေဒါ နှင့်မ Nge Naing တို့ အားဂုဏ်ပြုပါ၏
ယနေ့သတင်းထူးတစ်ခုအနေနဲ့NLDမှ ဘူမသိကိုးမသိ ကိုမိုးချီးဇွန်းပြောချက်အရ လွန်ခဲ့သောကနှစ်ရက်ခန့် ကဒေါ်ညု အာကာသသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း အတိအလင်းပြောကြားလိုက်ပါသည်။ သတင်းအစုံအလင်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ညုကြည်ဆိုသူသည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းအထိန်းအမှတ်အဖြစ် အမေရိကန် နာဆာအဖွဲ့ မှ အပိုလို ၁၇အာကာသယာဉ်ဖြင့်ဂုဏ်ပြုခေါ်ဆောင်သွားကာ ကမ္ဘာကို နှစ်ပါတ်နှင့် ၁၂နာရီခန့် ပတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒေါ်ညုအနေနှင့် ယခုလို အာကသခရီးစဉ်အား ပထမဆုံးလိုက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လဲ လူရှိန်အောင်အရင်တစ်ခေါက်ကလဲလိုက်ဖူးပါသည်ဟု ထုံးစံအတိုင်းဗြောင်ကျကျပင် ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ယခုခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်ညုအနေဖြင့် လပေါ်ရှိ ဂြိုလ်သားများနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထိထိရောက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလဲ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော်ကျော်သူအောင်အနေဖြင့် ဒေါ်ညုယခု တစ်ခေါက်ခရီးစဉ်တွင် ဂြိုဟ်သားများနှင့် အောင်မြင်စွာ ဒီမိုကရေစီအရေးဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။များမကြာမီကာလအတွင်းဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီ ကိုဒေါ်ညုကြောင့်ရရှိခဲ့ပါက လပေါ်ရှိဂြိုလ်သားများနှင့် မြန်မာပြည်သားတို
အတိုက်အခံ ဆရာဝန်မကြီး ရှင်ဂွမ်းဂွိ
13:12:00 Kyaw Thu Aung No comments
Shin Goun Gwep
သူမနာမည်ကတော့ Shin Goun Gwep (ရှင်ဂွမ်းဂွိ) အမည်ခံ Facebookမှာ မိန်းကလေးတန်မဲ့ဆဲဆိုညစ်ညမ်းနေသော ကရင်လူမျိုး အတိုက်အခံအမည်ခံဒေါ်လာစားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။သူမ၏အကြောင်းကို ဖိုးကျော်စုံစမ်းရာ သူမသည် ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်အခြေစိုက်ဒုတ္ခသည်စခန်းတွင် ၃နှစ်ခန့် နေထိုင်ပြီး မကြာသေးမီအချိန်ကာလ၌ ဖခင်နိုင်ငံ အမေရိကန် သို့ချောချောမောမောရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့်ကာလတစ်လျောက်၌ ဒုတ္ခသည်စခန်းမှ အမေရိကန်သို့မြန်မြန် ရောက်ရှိစေရန်အတွက် ရှေ့မှအမေရိကန်သို့ ဒုက္ခသည်အဖြင့်သူ့ ထပ်အရင်သွားခွင့်ရထားပြီးဖြစ်သော ကရင်လူမျိုးတစ်ဦး(အမည်ဖော်ပြရန်မသင့်)နှင့် အငှားလင်မယားအဖြစ် အမည်ခံပြီး အမေရိကန်သို့ ထိုယောက်ျား၏ဇနီးမယားအဖြစ်နှင့်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ အမျိုးသားက ပြောပြခဲ့ပါသည်။ယခုအချိန်တွင်သူမသည် Facebook၌ နိုင်ငံတော်မကောင်းကြောင်းရေးသော မည်သည့်စာမျိုးကိုမဆို တင်ပြီးသူမ၏ဝမ်းစာအတွက် အတိုက်အခံအမည်ခံကာ ဒေါ်လာရှာစားနေရပါသည်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လဲ ဆဲဆိုခြင်းကို ဝါသနာတော်တော်ထုံပုံရပါသည်(ဤကားစကားချပ်)ယောက်ျားတစ်ယောက်နည်းတူ ဆဲဆိုတတ်ပါသည်။သူ့ ကိုသူ ဆရာဝန်မဟူ၍ မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောဆိုပြီး အရှက်တရားကင်းမဲ့စွာပြောဆို ဖိုးကျော်ကိုဆဲဆိုပြီးBlockချကာထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ဖိုးကျော်တစ်ယောက် ကိုယ်နှင့်ခင်ခဲ့ဘူးသောအတိုက်အခံအီးယောင်ဝါးတစ်ယောက်အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကာ ဤပို့ စ်ဖြင့်ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ပါသည်။
04:45:00 Kyaw Thu Aung No comments
ဒီနေ့ ဖိုးကျော်တစ်ယောက်ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ဟိုသွားဒီသွား သွားရင်းလာရင်း လူ့ ဘောင်ချစ်ဘုန်းကျော်ဆိုတဲ့ ကတုံးကြီးဘလော့ထဲကို ဝင်ရာက်မွှေနှောက်ကာ အမှန်တရားလေးတစ်ချို့ ဖော်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်...အမှန်တော့သူလဲ ဒုတ္ခသည်အယောင်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပီး သြစတျေးလျရောက်ခါမှ တောသားမြို့ ရောက် အလေနတော ကလေကချေ ပေါက်လုပ်ပဲစား ဒုတ္ခသည်အတုများ(ယခုဒေါ်လာစားရင်းအငြိမ်ဇယားနေနေကြသော)သူအချင်းချင်း ဘူဘူချင်းတစ်လုပ်နေသော ကတုံးရဲ့ စာအချို့ ကို ထုတ်နှုတ်တင်ပြလိုက်ရပေသည်။ထိုကတုံးသည် ဖိုးကျော်၏အကြောင်းကိုဂဂနဏမသိရှိပဲနှင့်ဖိုးကျော်ကို myanmarexpress ရေးသူတစ်ယောက်ဟု ထင်နေသော အီးယောင်ဝါးအဆင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသူကို ငါးတန်းနှစ်မှသိရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လျက်နှင့်အဘယ်အတွက်ကြောင့် ဒုတ္ခသည် အဖြစ်နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်နေရသလဲဆိုတာ မေးစရာမေးခွန်းတွေဖြစ်လာပါသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စာများမှာ၎င်း၏ Blog ထဲမှာ blog postအနဲငယ်ဖြစ်ပေသည်.ရှူစားတော်မူကြပါ ပရိတ်သတ်တို့ ၎င်းတို့ ကိုအချောင်သမား ဒေါ်လာစားဟုခေါ်ရမည်လား..ဒုက္ခသည်လို့ ခေါ်ရမည်လား...နိုင်ငံရေးသမားဟုခေါ်ရမည်လား??
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နာမည်ကို ကြားတုန်းက ငါးတန်းလောက်ပဲရှိအုံးမယ်။ အတိအကျမသိဘူး။ စာအုပ်ထဲမှာသင်ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးလို့ပဲသိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း စာအုပ်ထဲမှာပါလို့သူ့ နာမည်ကိုကြားဖူးတယ်။ သူဘယ်လောက်ကောင်းလဲမသိ။
လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြားရတွေ့ရဖတ်ဖူးရတယ်။ ကျနော်က လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကို ဘယ်သူပေးလဲမသိဆိုပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်။
ကျနော်တို့ထမင်းငတ်နေတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး။ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေ ငတ်နေတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေလုပ်ပေးလားဆိုတော့ သူလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လက်ရှိအနေအထားအထိ ကျနော်တို့ကို ထမင်းဝတဲ့ဘ၀၊ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘ၀ကို မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး..။
လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုရင်အထက်က အခြေအနေတွေကို ဖြည့်ပေးနိုင်ရမယ်။ အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး။
ကျနော်က ဒီလိုမြင်တယ်။ လောလောဆယ်ကာလမှာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို မပြတ်သားဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူနာမည်ကြီးတာကို ဂုဏ်ယူနေပြီး နအဖပြောတာကို အခုထက်ထိကျနော်တို့ကို ပြန်မပြောသေးဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခင်ဗျားတို့ဘာ့ကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင်တင်လဲမသိ။ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘာလဲ????
သြစတျေးလျ နိုင်ငံကို နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရောက်လာကြတယ်။ ပြည်တွင်းကလည်း လာကြတယ်။ လေးငါးခြောက်လလောက်နေပြီးတော့ သူတို့က TV ဆိုရင် အပြားမှ။ ကြီးမှ ကြိုက်ကြတယ်။ Flat TV လို့ခေါ်တဲ့ TV အပြားက နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်တော့ သြစီက မြန်မာတွေ အိမ်တိုင်းနီးနီးရှိကြတယ်။
တချို့ လည်း အပြိုင်အဆိုင် သူဝယ်ရင် ကိုယ်လည်းဝယ်တယ်။ ကိုယ်ကြီးရင် သူလည်းလိုက်ကြီးကြတယ်။ TV အပြားကလည်း High Defination က ကောင်းတော့ ရုပ်တော်တော်ရှင်းတယ်။ လူတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ပေါ့။
ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းက TV အပြား မပြောနဲ့ ဂေါ်ပြားလောက်ပဲကိုင်ဖူးတဲ့လူက အခုဆိုရင် TV အလုံးမကြည့်ချင်။ အလုံးရှိနေရင် ဂုဏ်ငယ်သလိုမျိုး။ ငါ့အိမ်က အပြားက နင့်..အိမ်က အပြားထက်ပိုကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါက,နင့်ထက်ပိုပြီး ချမ်းသာတယ်ပေါ့။ ဒီလိုမျိုး။..ပြိုင်စရာမရှိ ကြံဖန်ပြီး အကြီးအသေး ပြိုင်ကြလေတယ်။
လုပ်တဲ့အလုပ်က စက်ရုံမှာ။ ဈေးဆိုင်တွေမှာ။ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမား။ ၀င်ငွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိပ်မကွာ။ အတူတူလောက်ပဲ။ ဒါကိုများ TV အပြားပြိုင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့။
တချို့ သော မြန်မာဒုက္ခသည်တွေက TV ပြားရင်၊ ကြီးရင် ပြီးရော ကျန်တာသူတို့စိတ်မ၀င်စား။ TV အပြားက Plasma လား၊ LCD လား၊ LED လားလည်းမသိ။ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး မီးတာခပိုသက်သာ၊ ပိုပြီးတိကျရှင်းလင်းလည်းမသိ။ သူတို့သိတာက ပြားရမယ်၊ကြီးရမယ်။
Flat TV ဆိုပြီး ဘိုလိုမခေါ်တက်တော့ ဘယ်လိုခေါ်လဲသိလား။ "ဟို TV ပြားပြားလေးကွာတဲ့"..ရီလည်းရီရတယ်။
ဖပ်နဲ့ ရှစ်နဲ့တော့ အလွတ်ရတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၅-နှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့ ကိုရွှေတို့ ဘိုလိုလည်း ကျွမ်းသလားမမေးနဲ့။ ရုံးကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စပြောပြီးဆိုရင် ခွေးအ,ကြီးလှည်းနင်းထားသလို။ အရေးအကြောင်းရှိရင် ဟိုလူ့ခေါ်ရ ဒိလူ့ခေါ်ရနဲ့။ ဘာသာ ပြန်ပေးပါအုံးဟဲ့။ အဲ...တခုတော့ရှိတယ်။ ဗမာတွေ ကိုယ့်အချင်းချင်းစုဝေးပြီဆိုရင် ပါးစပ်က တဖပ်ဖပ် Fuck ၊ တရှစ်ရှစ် (Shit) ပြောလိုက်တဲ့ ဘိုလို။ သူ့လောက်တက်တဲ့ လူ, မရှိတော့ဘူး။ လူအထင်ကြီးအောင်။
အားလုံးက ဓာတ်သိတွေပဲဆိုတော့ ဒီကောင်ဖပ်လည်း၊ ဖပ်တာပဲ အဖပ်တင်တယ်။ ဒီလူရှစ်လည်း ရှစ်တာပဲအဖတ်တင်တယ်။ ဘယ်သူမှလည်း အထင်မကြီး။
ထုိုင်း၊ မလေးမှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေ သုံးလေးနှစ်ဆိုရင် ထိုင်းနဲ့မလေးစကားကို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်ပြီ။ သြစတျေးလျက ရွှေမြန်မာတွေ ၁၀-နှစ်နေလည်း တဖပ်ဖပ်၊ တရှစ်ရှစ် နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်နေတော့တယ်။
ဒါ့ကြောင့် TV ဆိုရင်ပြားရမယ်။ ကြီးရမယ်။ ကျန်တာနားမလည်တဲ့ ကိုရွှေဗမာတွေ ဖြစ်နေကြတာပေါ့။
TV ပြီးတော့ ကား,အလှည့်။ ဒုက္ခသည်ဘ၀မှာတုန်းက ကားဆိုရင် ဆန်သယ်တဲ့ကားလောက်ပဲအနီးကပ်မြင်ဘူးတဲ့ လူတွေကအခုဆိုရင် ကားဆိုရင် Four Wheel မှ။ သူများတွေက Four Weel ကို တောတောင်တွေထဲမှာ စီးဖို့ အတွက်ပဲ ၀ယ်ကြတယ်။ မြန်မာတွေနဲ့ဗီယမ်နမ်တွေကတော့ တောထဲလည်းစီးတယ်။ မြို့ ပေါ်မှာလည်းစီးတယ်။ Four Wheel ရှိမှ ခေတ်မှီကြလေတယ်။
သူက လေးဖက်ယက်ဆိုရင်၊ ကိုယ်လည်း လေးဖက်ယက်လုပ်ကြတဲ့ဓလေ့။ ဘယ်လို နားလည်ပေးရမှန်းမသိတဲ့ မြန်မာတွေပါလားလို့ဆိုပြီး တွေးနေမိတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါ။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူများလုပ်တိုင်း လျှောက်လုပ်တဲ့လူစားတွေက အထက်ကပြောတဲ့အတိုင်း TV ဆိုရင် ပြားမှကြီးမှ။ Plasma လား၊ LCD လား၊ LED လား ခွဲခြားမသိတဲ့ လူစားမျိုးတွေပါပဲ။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကလည်း တဖပ်ဖပ် နဲ့ တရှစ်ရှစ်နဲ့။
ဘော်ဒါတို့ရေ...ယနေ့ကာလမှာ ရေပန်းစားတဲ့ စကားတခုရှိတယ်ကွဲ့ ။ ဒီစကား ကတော့....."အမေရိကမှာရှိတဲ့ ယောက်ဖ ၀ယ်ပေးတာ" ဆိုတဲ့ ဟာသလေးပါ။
လက်ရှိထိုင်းအခြေစိုက်အတိုက်အခံ ၈၈-မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်ဟုခေါ်သော ငကြောင်တွေဟာ ထိုင်းဘတ်ငွေ သုံးလေးသိန်းတန် ကားကြီးကားကောင်း၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေနဲ့ နေသတဲ့ကွယ်။ အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့က သူများရီရအောင်ဒီလိုလည်း ပြောတက်တယ်ကွဲ့ ။
"အမေရိကားမှာရှိတဲ့ ငါ့ယောက်ဖက ၀ယ်ပေးတာ"
ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး "သူများယောက်ဖတွေတော့ အတော်ကောင်းကွာ" ..RFA က လူကြီးတစ်ယောက်က မနေ့က ဒီလိုပြောတယ်။
ကဲ...ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူများတွေကားကြီးကားကောင်း အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း NGO က ရတဲ့ငွေနဲ့ နေနိုင်တာကို မနာလိုမဖြစ်ပါဘူး။ သို့သော်...ဒီလိုသူခိုးတွေ တော်လှန်ရေးမှာ ကြီးစိုးနေတာကို ဒေါသထွက်လို့ပါဗျာ။
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ကိုဇော်ဇော်ထွန်း (ခ) ကိုဇော်ဇော်ထွင်းက သူ့ရဲ့ ဘတ်သုံးသိန်းကျော်တန်ကားကြီးကို အမေရိကမှ သူ့ယောက်ဖ၀ယ်ပေးကြောင်း...လူ့ဘောင်သစ်က ရော်ဘဲတွေကို အသိပေးအပ်သည်။ စံခလပူရီက နိုင်ကစော့မွန်ကလည်း သူ့အိမ်ကြီးကို အမေရိကက သူ့ယောက်ဖ ဆောက်ပေးကြောင်း အားကြမခံ ခုခံပါကြောင်း။
၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ စာအုပ်...ဖတ်ပါ..မှတ်ပါ...လေ့လာပါ...ပီးမှဝေဖန်ပါ
08:58:00 Kyaw Thu Aung No comments
နိုင်ငံရေးဟုပြောလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုနိုင်ငံရေး ဘယ်နေရာမှာရှိလဲတောင်မသိတဲ့ ယောင်ခြောက်ဆယ် အီးယောင်ဝါးလေးတို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်အရင်ဖတ်ပြီးမှ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိုးကျော်မှတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်.....မိမိစက်မှာ စာအုပ်ဖတ်ရန် Software မရှိပါက Adobe Reader နဲ့ ဖတ်ရန် Download အရင်ယူလိုက်ပါ
Posted in: စာအုပ်
09:56:00 Kyaw Thu Aung No comments
ဒေါ်ညုရဲ့ NLD logo
မေမေညုက အရင်က တော့ sexyပဲ သားတို့ သမီးတို့ ရေ အင်္ဂလိပ်လောက်တော့အပျော့ပေါ့
သား တို့ အတွက်
အမေ့ ဘ၀လေး အကြောင်း
အမေ တို့ က ပြည်ပ ကို ထွက်နေခဲ့ရတာ က
စရမှာပေါ့ သားရယ် ..။
ပြည်ပမှာ အမေ့ အမေ က
အမေ တို့ ကတော့ ကျောင်းတက်
ဒီလို နဲ့ အောက်စဖို့စ် တက္ကသိုလ်တက်
ကာမ တဏှာ ဘာသာ
ဒီလို နဲ့ ချစ်သူတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြောင်း
အမေ ရမ္မက် လိုအပ်ချက် ကတော့
ဟောင်းမသွားဘူး သားတို့ ရယ်
သူ အမေ့ ပေါ် အချီကြီး ဆိုးခဲ့တာတွေ
မလေးရှား က ကုလား
အမေနဲ့ Living Together နေခဲ့တာတွေ
အဲ့တာတွေ ရဲ့ နောက် ထပ်
အမေ ဆက်မပြောရက်တော့ပါဘူး သားတို့ရယ်..။
အဲ့လို က နေ့စဉ် ရက်ဆက် ပဲလေ..။
တစ်နေ့ တော့ ..
့အဖေ တော် ၊ အခုသားတို့ ရဲ
မိုက်ကယ်အဲရစ်စ် ဆို သူ နဲ
သူ က အမေ့ ကို လက်ထပ်
ဒါနဲ့ ကျိုးကြေနေတဲ့ အမေ ဘ၀
သိပ်ဟန်ကျသပေါ့ သားတို့ ရယ်..။
ဒီလို နဲ့ ပျော်ပါး
ပြဿနာ တစ်ခု က
အမေဘ၀ ထဲ ကိုရောက်လာတယ်
သာယာနေတဲ့ အမေ့ဘ၀ တစ်ကွေ့ 
CIA က အမေ့ကိုခေါ်
“ခိုင်းတိုင်းမလုပ်ရင် sex movie ဖြန့်မယ်နော်” တဲ့…။
အမေ့ မှာ မျက်လုံးပြုး မျက်စံပြုး
အမေ့ ပျော်ပါး ခဲ့တဲ့
အမေ့ ကို ကြိတ်ပြီး လုပ်ကြံနေပြီလေ …။
ထိုအချိန်မှာ ပဲ အလျဉ်းသင့်
အမေ နေမကောင်းချိန်း က လဲ ဖြစ်တော့
အနှစ် ၂၀ ကျော် အမေ ခွဲခွာထားတဲ့
အစမှာတော့ အနှစ် ၂၀ ကျော်
ခွဲ ခွာခဲ့တဲ့ နောက် ..နိုင်ငံအကြောင်း
ဘယ် အမေ ကောင်းကောင်းသိမလဲ?
အဲ့တော့ ပထမ ဦးဆုံး ကျိုးကုပ်
NLD မှာ အတွင်းရေးမှူး လုပ်ရတာပေါ့..။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စနဲ့
အမေ အသိဥာဏ်လေး နဲနဲ ရလာတယ်..
“နိုင်ငံရေး ဟာ လူတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်
ဟင်းချက်တာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ “လို့
သား တို့ က တသောသော ရယ်
အမေ့ အတွက်တော့ အဲ့တာ ဂွင်ပဲပေါ့ကွယ်..။
သားတို့ အမေ့ကို ချစ်ပေးခဲ့တာ
အမေ့ ဆောင်းထားတဲ့ ဘီးလူးခေါင်းလေး
တောရက်စ် နဲ့ လဲ အတူတူ အိပ်ရ
သားတို့ ရဲ့ ဂရုဏာတွေလဲ
အကျယ်ချုပ်ကျနေလို့ အမေ့ ဘ၀
အမေ့ နေ့ရက်တွေ အေးချမ်းခဲ့တယ်လေ..။
ခုတော သားတို့ ရယ်
ငါး လ …
အမေ ဘာမှ လဲ မလုပ်ပြနိုင်ဘူး..။
အမေရိကန် လဲ မညွှန်ကြား
ပြည်သူပြည်သားတစ်ချို့ ကလဲ မယုံ
ပါတီ ကလဲ မှတ်ပုံတင်ရမယ့်အချိန်မှာရှုံး
အမေ့ဘ၀ ခွေးလုံးလုံး ဖြစ်နေရပြီသားတို့ရယ်..။ ။
သားတို့အားလုံး ရဲ့ မေမေ ညု
အီးယောင်ဝါးတို့ရဲ့ အဖေ ဖိုးကျော်
07:55:00 Kyaw Thu Aung No comments
ဒေါ်ညု ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရ၍ မချိတင်ကဲပြုံးနေပုံ
ဟောပြောပွဲတခုတွင် အောက်မှပရိတ်သတ်ကို ညုနေစဉ်
သတိထားစရာ မျက်လုံးစိမ်းနှင့် သတ္တဝါ
09:25:00 Kyaw Thu Aung No comments
လူဟူ၍ ဖြစ်လာ ကြပြီဆိုလျှင် မျက်လုံးစိမ်းနှင့် သတ္တဝါကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ဆုံဖူးကြမည်။ သတိထား မိသော်ရှိ မထားမိသော်ရှိ ချက်လုံး စိမ်းတို့နှင့် အကြည့်ခံ ဖူးကြသလို မိမိ မျက်လုံးတို့လည်း စိမ်းသွား တတ်ကြသည်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ မျက်လုံး စိမ်းနှင့် သတ္တဝါ သည် မလိုလားစရာ အလွန်ကောင်းသည်။
ကျွန်တော်ပြောချင်သော မျက်လုံးစိမ်းနှင့် သတ္တဝါမှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် Green-eyed Monster ကို တိုက်ရိုက် ပြန်ထားခြင်းဖြစ် သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့က မနာလိုစိတ် (Jealousy) ကို ထိုသို့တင်စားခေါ်ဝေါ် ခြင်းဖြစ် သည်။ Green with envy “မနာလိုစိတ်တို့ ထိပ်တက်ဆောင့်” သည်ဟုလည်း သုံးတတ်ကြသည်။ မနာလိုစိတ်ကို အစိမ်းရောင်နှင့် အင်္ဂလိပ်တို့ ဘာကြောင့်ရည်ညွှန်းသည်ကိုကား ကျွန်တော် မသိပါ။ ကျွန်တော် သိ တာက မျက်လုံးစိမ်းတို့ကို ကျွန်တော် မနှစ်မြို့။ ကိုယ့်ကိုယ် လည်း အကြည့်မခံချင်၊ ကိုယ်ကလည်း မကြည့်ချင်။ မျက်လုံးစိမ်းတို့ ကိုယ်ပေါ်သို့ ရောက်နေလျှင် စိတ် မသိုးမသန့် ခံစားရတတ်သလို မိမိမျက်လုံး စိမ်းနေလျှင်လည်း မိမိကိုယ်ကို အောက်တစ်ဆင့်ရောက် သွားသကဲ့သို့ ခံစားရသောကြောင့်ပင်။ ကိုယ်ပိုင်သည့် မျက်လုံးအစုံ စိမ်းသွားမှာတော့ ပိုကြောက်သည်။
အခြားသူ၏ မျက်လုံးစိမ်းသည်မှာ သူ့စိတ်အခံနှင့် ပိုဆိုင်ပြီး မိမိမျက်လုံးမှာ မိမိနှင့် ပိုဆိုင်သည်။ မိမိမျက်လုံး စိမ်းသွား လျှင် ထိုမျက်လုံး ရစ်ဝဲခံရသောသူသည် မိမိထက် တစ်နေရာရာတွင် သာသည်ကို ဝန်ခံလိုက်သလို ဖြစ်သွား သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိက သူ့လောက်အဆင့် မရှိကြောင်း မိမိကိုယ်ကို ကြေညာလိုက်ခြင်းပင်။ စေ့စေ့ တွေး ကြည့်လျှင် အတော်အခံရခက်လိမ့်မည်။ မနာလိုခြင်းမှာ ခေတ္တခဏသာ ကြာသည် ဖြစ်စေ မုန်းတီးခြင်း တစ်မျိုး ပင်ဖြစ် သောကြောင့် မိမိမုန်းသောသူသည် မိမိထက်သာနေသည်ဟု သိလိုက်ရခြင်းမှာ ကသိကအောက် နိုင်လှပေမည်။
သို့သော် မိမိမျက်လုံးစိမ်းသွားမှန်း သိလိုက်ရန် မလွယ်။ စက္ကန့် ပိုင်း မိနစ် ပိုင်း လောက်မျှသာ ကြာတတ်သလို လူဆို သည် မှာ မိမိစိတ်ကို သိလေ့မရှိသောကြောင့် မျက်လုံးစိမ်း မစိမ်း မသိလိုက်တတ်။ မိမိထက် ရုပ်ဖြောင့်လျှင် မျက်လုံး စိမ်းတတ်သလို မိမိထက် ငွေကြေး သုံးစွဲနိုင်လျှင် မျက် လုံး စိမ်းတတ်ပြန်သည်။ ပညာတော်နေလျှင်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တို့၏ အရေးပေးအလွန်ခံနေရလျှင်၊ ရာထူးရာခံ ကြီးမြင့်နေ လျှင် စသည်စသည် မိမိထက် တစ်ခုခုသာသူနှင့်တွေ့လျှင် မျက်လုံးတို့ စိမ်းသွား တတ်သည်။
မျက်လုံးစိမ်းခြင်းမှာ လူတို့၏ မွေးရာပါဖြစ်ပုံရသည်။ အုပ်စုဖွဲ့ နေတတ်သော သတ္တဝါ (Social Animal) ဖြစ်သည့် လူတို့တွင် အဖွဲ့ ကောင်းစားရေးဟူသော ညဉ်ကလေးရှိသလို အဖွဲ့တွင်း မိမိအခြေ အနေကောင်းရေး ညဉ်ကလေးလည်း ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိထက် သာသူတွေ့လျှင် မနာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည်။ မနာလိုစိတ် အားကြီး လာသောအခါ ထိုသူကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် နိမ့်ကျသွားအောင် လုပ် လိုစိတ်၊ ပြိုင်ဆိုင်လို စိတ်ပေါ်လာမည်။ အုပ်စုတွင်းတွင် မိမိအခြေ အနေကောင်းအောင် ကြိုးစားရန် စေ့ဆော်ချက်တစ်ခုပင်။ သို့သော် ယင်းသည် ငါနိုင်လျှင် သူရှုံး၊ သူနိုင်လျှင် ငါရှုံး Zero Sum သဘော တရား ဖြစ်နေသည်။ မိမိအခြေ အနေကောင်းရန် ကြိုးစားရင်းဖြင့် အုပ်စု အကျိုးစီးပွား ကျဆင်းသွားတတ်သည်။
မျက်လုံးစိမ်းခြင်းမှာ တကယ်တမ်းတော့ ကာယကံရှင် စိမ်းသူ တို့အဖို့ အတော်ပူလောင်ပါသည်။ နိပါတ်တော်လာ ရွဲကုန်သည်ဇာတ် တွင် ဘုရားလောင်းရွဲကုန်သည် ရွှေခွက်ကြီးရသွားသည်ကို ဒေဝဒတ် လောင်းရွဲကုန် သည် မနာလိုစိတ် ကြီးမားစွာဖြစ်ရာမှ နောက်ဆုံး နှလုံးကွဲကာ သေပွဲဝင်ခဲ့ရသည် အထိ။ ဒေဝဒတ်လောင်း၏ စိမ်းသွား သောမျက်လုံးသည် သေရာသို့ပါ ပါသွားပြီး ထိုဘဝမှစသောအငြိုးသည် ဘုရားလောင်းနှင့် ဒေဝဒတ်ကြုံသည့်ဘဝတိုင်းထိ တောက်လျှောက် လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ဒေဝဒတ်သည် အလားအလာကောင်း ပါလျက်နှင့် သူ့ဘဝသည် ဘုရားလောင်းကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ် ခြင်းဖြင့်သာ သံသရာတစ်လျှောက် အချိန်ကုန်ခဲ့ရခြင်းမှာ မျက်လုံးကို မထိန်းနိုင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
အပူဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ အလွယ်တကူ ကူးသည် ဖြစ်ရာ မျက်လုံးစိမ်းရှင်များနှင့် တွေ့ကြုံဆက်ဆံနေရသူများအတွက် မှာလည်း ပူလောင်လှသည်။ ပူလောင်ရုံဖြင့်မပြီး၊ ထိုသူတို့နှင့် လက်တွဲ လုပ်ကိုင် ရသော မိသားစုရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ တိုင်းရေးပြည်ရေး စသည် တို့တွင်ပါ အခက်အခဲများစွာ ကြုံရသည်။ မျက်လုံးစိမ်းသွားပြီဆိုလျှင် ခံစားချက်ကဲ (Emotional) နေသည့်အတွက်ကြောင့် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် မစဉ်းစား (Rational) နိုင်တော့။ ရှေ့မတိုးနိုင်ခြင်း၊ မကွဲသင့်ပဲကွဲ၊ မပြဲသင့်ပဲပြဲခြင်းများ၏ လက်သည်ကိုကြည့်လျှင် နောက်ကွယ်တွင် များသောအားဖြင့် Green-eyed Monster ရှိနေ တတ်သည်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိသူများ၊ စိတ်တွင် လုံခြုံမှုမရှိသူများ (Insecure) ၏ မျက်လုံးများသည် အလွယ်တကူ စိမ်းလေ့ရှိသည်။ အရည်အချင်း နည်းသောသူတို့လည်း မျက်လုံးများ ခပ်မြန်မြန် စိမ်းတတ်သည်။ သို့သော် အရည်အချင်းနည်းတိုင်း မျက်လုံးစိမ်းလွယ် သည်ကားမဟုတ်။ စိတ်ထားတတ်လျှင် မျက်လုံးစိမ်းနှုန်းကို ထိန်းထားနိုင်ပေသည်။ ပြိုင်ဆိုင် လိုစိတ် အလွန်ကြီးသူများသည်လည်း မျက်လုံးစိမ်း လွယ်တတ်သည်။
တစ်ဖန် မျက်လုံးစိမ်းတတ်သူများသည် “ရေတွင်းထဲမှ ဖား သူငယ်” ကဲ့သို့ နယ်ကျဉ်းသူ၊ အမြင်ကျဉ်းသူများဖြစ်တတ်သည်။ သူတို့သည် နေရာ ကွက်ကွက်လေးတွင်သာ နေရာရရေး ပြိုင်ဆိုင်တတ် သူ များဖြစ်သည်။ အပြင် လောက ကျယ်ကို မသိ၊ စိတ်လည်း မဝင်စား။ အပြင် လောကကိုသာ လှမ်းကြည့်လျှင် မိမိ ပြိုင်ရမည့်သူများသည် မြန်မာများ သာမကဘဲ ဗီယက်နမ်များ၊ ထိုင်းများ၊ ဂျပန်များဖြစ်သည်ကို သိသောကြောင့် မနာလိုစိတ် နည်းသွားပေမည်။
သို့သော် မနာလိုစိတ်ကိုယ်၌က နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Comparing မှ လာသည်ဖြစ်ရာ အနီးအနားမှ သူများကြောင့်သာ မနာလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ် ပေသည်။ အကောင်အထည်ကို အလွယ်တကူ မြင်ရသူများနှင့် မိမိကိုယ် ကို နှိုင်း ယှဉ်ရန် အလွယ်ဆုံးမဟုတ်ပါလား။ အဝေးမှလူ၊ မိမိက ရှိမှန်းပင် မသိသောသူကို မနာလို မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ အိမ်နီးနား ချင်းအချင်းချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း၊ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း၊ ဆွေမျိုး အချင်း ချင်း အကြားတွင်သာ မနာလိုစိတ်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်လုံးစိမ်းတို့သည် မိမိအမြဲတွေ့ကြုံနေသူများ၊ မိမိချစ်ခင် သူများ၊ မိမိဘဝထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်များထံ လာဖို့သာများရာ ကျောချမ်းစရာ ပင်။ သို့သော် မျက်လုံး စိမ်း၏ သဘောသဘာဝကိုယ်၌က အနီးသို့သာ ကြည့်တတ်ရာ မည်သို့ရှောင်ရှားမည်နည်း။ မျက်လုံးစိမ်းကို ရှောင်ဖို့ရန်ကား မလွယ်ပါ။ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ရှိသမျှ မျက်လုံးစိမ်းတို့ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မျက်လုံး စိမ်း လွယ်သော အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် စိမ်းခဲသော အသိုင်းအဝိုင်းဟူကား ရှိနေပါသည်။ စိတ်ကောင်းရှိသူ၊ မရှိသူ၊ ဆောင့်ကြွားကြွားနိုင်သူ၊ မနိုင်သူ မည်သူ့ကိုမဆို မျက်လုံးစိမ်းတို့ ရစ်ဝဲလာနိုင်သော်လည်း စိတ် ကောင်းရှိသူ၊ နှိမ့်ချတတ်သူသည်မူ မျက်လုံးစိမ်းတို့ဒဏ်မှ ယေဘုယျအားဖြင့် သက်သာနိုင်သည်။ မျက်လုံးစိမ်းနှင့် အကြည့်ခံရခြင်းမှာ အခြားသူများ၏ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း တစ်မျိုးလည်းဖြစ်သည်။ မိမိထံတွင် ထိုသူတပ်မက် သတိထားစရာ မျက်လုံးစိမ်းနှင့် သတ္တဝါ သောအရာတစ်ခုခု ရှိနေခြင်းကို ထိုသူကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ် ပြုလိုက်ခြင်းသဘော ဖြစ်သည်။ မျက်လုံးစိမ်းဖြင့် ကြည့်လိုက်သည်နှင့် အကြည့်ခံရသူသည် မိမိထက် တစ်ဆင့်တက်သွားပေသည်။
မျက်လုံးစိမ်းကို ရင်ဆိုင်ရခြင်းသည် မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မျက်လုံးစိမ်းကို ကြောက်သောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို လျှိုလွန်း ခြင်းမျိုး၊ နှိမ့်ချသင့်သည်ထက် အလွန်အမင်း နှိမ့်ချခြင်းမျိုးကိုမူ မလုပ် သင့်ပါ။ မျက်လုံးအလွယ်တကူစိမ်းတတ်သောသူတို့သည် စိတ်မလုံခြုံသောသူများဖြစ်ရာ သူတို့ကို ကရုဏာမသက်လျှင် သော်မှ သူတို့၏ စိတ်အခြေခံကို နားလည်လျှင် မိမိတွင် တန်ပြန် ဒေါသ ဖြစ်ခြင်း လျော့သွား မည်။ အကြည့်ကို ရှောင်လွှဲခြင်းထက် မိမိမျက်လုံးမစိမ်းရေးကို အဓိက ထားသင့်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ အထူးသဖြင့် ပေတံကိစ္စဖြစ်သည်။ မိမိ၏တန်ဖိုးကို ဘာပေတံဖြင့် တိုင်းမ လဲ။ လူဆိုသည်မှာ မိမိတန်ဖိုးကို ဥဿုံတန်ဖိုး (Absolute Value) နှင့်တိုင်းခဲပြီး အခြားသူများနှင့် ယှဉ်ကာတိုင်း (Relative Value) တတ်သည်။ အရပ်ခြောက်ပေ ရှည်သော်လည်း မိမိအိမ်နီးချင်းက ခြောက်ပေ သုံးလက်မ ရှိနေလျှင် ပုသွားသည်ဟု ခံစားရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြားသူနှင့် မတိုင်းလျှင် မိမိထက် ထိုသူသာစရာ မရှိတော့။ ထိုအခါ မျက် လုံးတို့ စိမ်းခွင့်မရှိတော့။
သို့သော် ပုထုဇဉ်သာဖြစ်နေသေးလျှင် မျက်လုံးတို့ စိမ်းမြဲစိမ်းနေလေ့ရှိသည်။ ကုစားရန်နည်းတစ်နည်းမှာ မိမိစိတ်ကို မိမိကြည့် တတ်အောင် လုပ်ထားခြင်းပင် (self-awareness ၊ self-reflection) မိမိစိတ်ကို မိမိ ကြည့်သော အလေ့အကျင့် လုပ်ထားလျှင် ဒေါသဖြစ်က ဒေါသဖြစ်မှန်းသိသည်၊ လောဘစိတ်ဖြစ်က လောဘဖြစ်မှန်းသိသည်၊ မနာလိုစိတ်ဖြစ်ပါက ဖြစ်မှန်းသိတတ်သည်။ သိလိုက်သည်နှင့် စိတ်၏ သဘောမှာ ရပ် သွား၊ ပျောက်ပျက်သွားသည်။ ထိုအခါ မနာလိုစိတ် အဓွန့်မရှည်တော့။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်သည် မျက်လုံးစိမ်းလွယ်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေလျှင် နေရထိုင်ရ ကျဉ်းကြပ်သည်။ အဓိကအလုပ်ထက် မျက်လုံးတို့ စိမ်းလာမည်ကို သတိထားနေရသဖြင့် အလုပ်အကိုင် မပြောင်မြောက်တော့။ မျက်လုံးစိမ်းခြင်းသည် လူမျိုးအလိုက် အတွေ့ ရများသော စရိုက် လက္ခဏာ (National Character) ဖြစ်နေလျှင် အများအကျိုးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ခဲယဉ်းပြီး နိုင်ငံ ရှေ့သို့ ရွေ့ရန် ခဲယဉ်းပေမည်။ “တစ်ယောက်ကအစ တစ်ရာ” ဆိုသလို မျက်လုံး တို့ မစိမ်းလွယ်အောင် မိမိကစ သတိကပ်နိုင်ပါမူ “နေပျော်သောပတ်ဝန်း ကျင်” ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပါ ဆောင်ကြဉ်းနိုင်လိမ့်မည်။ အရေး အကြီး ဆုံးမှာ မိမိမျက်လုံးတို့ အလွယ်တကူ မစိမ်းဖို့ပင်။
00:04:00 Kyaw Thu Aung No comments
သနားစရာကောင်မလေးကတော့တဏှာရူးတို့ ရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်နေကြောင်းသိမယ်တောင်မထင်မိပါ
ဒီနေ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မှာတော့ ဖိုးကျော်တစ်ယောက် Facebook တွင် ဟိုမွှေ ဒီမွှေ လိုက်မွှေရာ၌ အမြင်မတော်တာလေးတွေတွေ့ မိသောကြောင့် မိမိကို မိန်းခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဓါတ်ပုံတင်မိ၍ အပြစ်တင်နေကြတော့ သူတော်ကောင်းကြီးများအား မေးခွန်းလေးများပြန်လည်မေးလိုက်ပါသည်။အောက်ပါဓါတ်ပုံများမှာ papargyi wai ဟုခေါ်သော ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်....ကျွန်ုပ်ဖိုးကျော် မဗေဒါသမီးအကြောင်း အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်ချပြတော့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေကြတဲ့ ကိုကို မမတို့papargyiwai အကောင့်ထဲမှာတော့ ဘာမှမပြောကြတဲ့အပြင် စောက်ရှက်မရှိ Like တောင်ပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်ဗျာ။ နားမလည်နိုင်တော့လို့ဘယ်လိုတွေလဲရှင်းပြကြပါခင်ဗျာ။ဖိုးကျော်မှားနေလားမှန်နေလား??papargyiwai ဆိုတဲ့ အတိုက်အခံအီးယောင်ဝါး သကောင့်သားကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်ဖိုးကျော်ကိုအပစ်လာတင်ပြီးသူကိုတိုင်ခုလိုမျိုး မိမိနှင့် တစ်ခါမျှပင်မသိဖူးသောမိန်းခလေးများ၏ဓါတ်ပုံကိုခိုးရိုက်ခိုးတင် နေပီး ခုလို မှိုချိုးမြှစ်ချိုးပြောနေကြခြင်းသည် တရားမျှတမှူရှိပါသလော??ဒါဟာ ကျွန်တော်ဥပမာတခုပြောပြတာပါ ...အွန်လိုင်းမှာ မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်နေသော papargyi waiလို အတိုက်အခံယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ကောင်တွေ အများကြီးရှိနေသေးကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
07:01:00 Kyaw Thu Aung No comments
လူမှုဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ သုံးစွဲ လာရတဲ့ Facebook
09:39:00 Kyaw Thu Aung 1 comment
မေကိုလတ်တို့ ကတော့ အကျိုးရှိရှိ Facebookမှာ condom ကြော်ငြာပါတယ်
နည်းပညာ တိုးတက် နေသော ယနေ့ ခေတ်ကြီး တွင် အင်တာနက် သုံးစွဲ နေသော လူငယ်များ နှင့် လူကြီးများပါ မကျန်သုံးစွဲသူ ထက်ဝက် ကျော် သည် facebook ကို တွဲဖက် သုံးစွဲလာ ကြ သည်။ ထို့ပြင် Facebook ပေါ်တွင် မိမိအ ကောင့် အတွင်းမှ သူငယ်ချင်း များပေါင်း စု၍ လူမှုရေး ကွန်ရက် တစ်ခုပြု လုပ်ကာ ပြောင်းလဲ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် လာကြ သည်ကို တွေ့ မြင်လာ ကြသည်။ G-mail Account အတွင်းမှ ခင်မင် သော သူငယ်ချင်း များကို ရွေး ချယ်၍ Facebook တွင် အုပ်စုဖွဲ့ လာကြသည်။ တချို့ လူငယ်များမှ ယင်း Facebook ပေါ်တွင် ပရဟိ တလုပ်ဆောင်ရန် အတွက် Comment များရေးသား ကာကြော်ငြာ များရေးသားခြင်း ဖြင့် လူမှုရေးကွန်ရက် သဖွယ် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင် နေကြပေ သည်။
Facebook ပေါ်တွင် အနယ် နယ်အရပ်ရပ်မှ သူငယ်ချင်းများပေါင်း စုကာ အမှန် တကယ် အကူအညီ လို အပ်နေသော နေရာများ၊ မိဘမဲ့ဂေ ဟာများ၊ ဘုန်ကြီးကျောင်းအစရှိသော နေရာ များတွင် အလှူအဒါန်းများပြု လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုလုပ်ကိုင်နေ ကြသည်။ "Facebook ကသိတဲ့ သူငယ် ချင်းတွေစုပြီးတော့ မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ အလှူလုပ်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထား တာကြာပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ရွေးပြီး ဒီခေါင်းဆောင်က ပိုက်ဆံ လိုက်ကောက် တာတို့၊ လူစုတာတို့ကို သူကစီစဉ်ပေးပါတယ်။ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် Facebook ပေါ်မှာ ရင်းနှီးနေကြပေမယ့် အပြင်မှာ တစ် ခါမှမတွေ့ဘူး၊ မဆုံဖူးပါဘူး။ ဒီလိုလူ မှုရေးကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက် Facebook ကို ကြားခံအနေနဲ့ အသုံးပြု တာကြောင့် တစ်ဖက်က ကြည့်ရင် ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ" ဟု မတ် လ(၁၀)ရက်နေ့က မိဘမဲ့ဂေဟာတွင် Facebook သူငယ်ချင်းများ သွား ရောက်လှူဒါန်းမှုကို ခေါင်းဆောင်ဖြစ် သူ ကိုမျိုးမင်းက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် တက်သစ်စ Hip Hop အဆိုတော်ကလေးများရှိရာ Underground အဖွဲ့ကလည်း ပရဟိတပြု လုပ်ရန်အတွက် Facebook ပေါ် တွင် Underground အဆိုတော် များကို နှိုးဆော်စည်းရုံးခြင်းဖြင့် Facebook ကို အသုံးပြုလာပါသည်။ ၎င်းတို့အဖွဲ့ကို Hip Hop Generation ဟု အမည်ပေးထာကြောင်း သိ ရသည်။
'ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က Underground ကို တက်သစ်စလူငယ် အဆိုတော်များနှင့်စုပေါင်းပြီး ရန်ပုံငွေ ရှိုးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ကာ ရလာတဲ့ပိုက်ဆံ ကို အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေ ရာတွေမှာလှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ရည် ရွယ်ပြီးသည်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားတာ ပါ။ Facebook ပေါ်မှာလည်း နှိုး ဆော်ကမ်းလှမ်းစာတွေ ရေးထားပါ တယ်။ တချို့အဆိုတော်မဟုတ်တဲ့သူ တွေကလည်း အလှူမှာပါဝင်ချင်တယ် ဆိုပြီး ဆက်သွယ်လာကြတယ်။ သူ တို့က Facebook ပေါ်မှာ တင်ထား တဲ့ မေးလ်ကိုဖတ်လိုက်မိပြီး စိတ် ဝင်စားကာ ဆက်သွယ်လာကြတယ်။ G-mail ကနေပြီးတော့ မိမိအကောင့် ထဲမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို mail ပို့ပြီး လူစုလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အ လုပ်နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင် Comment ရေးထား လိုက်ရုံနဲ့ဖတ်မိတဲ့သူတွေက ဆက် သွယ်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် Facebok ကို လူမှုရေးကွန်ရက်တစ်ခု အနေနဲ့ အသုံးပြုတယ်ထင်တယ်" ဟု Hip Hop Generation အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင် Underground မှ ကိုနော် လေးက ပြောသည်။
တချို့ လူကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ ရပ်ဝေးမှာရောက်ရှိနေသော သားသ မီးများနှင့်စကားပြောရန်အတွက်နှင့် ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် Facebook ကို G-mail အစားအသုံး ပြုလာကြသည်။ Junior Donation ပရဟိတ အဖွဲ့ကလည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့အကြောင်း ကို Facebook ပေါ်မှာ ရေးသား ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်းတို့ အဖွဲ့လူစုပုံမှာ အဖွဲ့ဝင်ချင်သူများ သိ သာရန်အတွက် ၎င်းတို့ရင်ဘတ်ပေါ် တွင် ၎င်းတို့အဖွဲ့နာမည်တံဆိပ်ကို ထိုးထားကာ ဒဂုံတက္ကသိုလ်နှင့် GTC ကျောင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် များတွင် စုစည်းထားသည်။ ၎င်း Junior Donation ပရဟိတအဖွဲ့သည် ယခု နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လူငယ်များစု ပေါင်း၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရှိ ဘုန်းကြီး ကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် သန့်ရှင်းရေးများကိုပြုလုပ်၍ ကု သိုလ်ယူကာ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။ ၎င်းလူငယ်များ၏ လုပ်ရပ် များကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် မြန်မာလူ မျိုးများအတွက် ဂုဏ်ယူဝံ ကြွားဖွယ် ရာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
"ကျွန်တော် Facebook ကို သုံးစွဲနေတာ (၁)နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ။ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်သုံး ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ ကျွန်တော့် Account မှာ သူငယ်ချင်းလေး ထောင်ကျော်နေပြီ။ သတင်းထောက် တွေ၊အနုပညာရှင်တွေနဲ့စာရေးဆရာ တွေလည်းပါဝင်တယ်။ ကျွန်တော်က တော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေး တွေကို သူငယ်ချင်းတွေဆီပို့ဖြစ်တာ များတယ်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်း အရာ၊ သ တင်းများ၊ ဟာသများနှင့် အခက်အ ခဲတွေကိုရေးသားပြီး Mail ပို့လေ့ရှိ တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံတစ် ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ Virus တစ်မျိုးဝင်နေတာရှိတဲ့ Anti Virus software တွေနဲ့ သတ်တာ လည်းမရဘူး။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော့် နီးစပ်ရာ ကျွန်တော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကို မေးလ်ပို့ပြီး အကူအညီတောင်း ခဲ့တယ်။ (၂)ရက်အကြာ Mail တစ် ခုဝင်နေပြီး Virus အား မည်သို့ဖြေ ရှင်းရမည်ကို မေးလ်ဖြင့် စင်ကာပူနိုင် ငံတွင် ကွန်ပျူတာ(ITCS )ကျောင်း တက်နေသော သူငယ်ချင်း ကိုနေမျိုး က ကူညီဖြေရှင်း ပေးခဲ့တယ်" ဟု GTC တက်နေပြီး Facebook သုံး စွဲသူ ကိုသားထက်က ပြောကြား သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအ ကြိမ် အပျက်အစီးများခဲ့သော နာဂစ် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားသော အချိန် တွင်လည်းကောင်း၊ ဂီရိမုန်တိုင်းတိုက် ခတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယခုလတ် တလော ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် အင်အားပြင်း ငလျင်တိုက်ခိုက်မှုစသည့် ရှောင်လွဲ၍မရသော သဘာဝ ဘေး အန္တရာယ်များကြောင့် ရပ်ရွာများပျက် စီးဆုံးရှုံးမှုများ တွင်လည်းပြန်လည် ထူ ထောင်ရန် မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် Facebook သုံးစွဲသူ မြန်မာလူမျိုးများက နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းများ ထံမှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းစာ အဖြစ် မေးလ်များပို့ကာ ပျက်စီး သွားသော ရပ်ကွက်များပြန်လည် ထူထောင်ရာတွင် ငွေအား (သို့မဟုတ်) လူအားဖြင့် ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများနှင့် ဖုန်းနံပါတ် ပါ Mail များကို ပေးပို့ခြင်းများကို လည်း ပြုလုပ်ကြ သည်ကို Facebook ပေါ်တွင် တွေ့ရသည်။
Facebook ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်များဖြစ်ကြသော စာရေး ဆရာ၊ သတင်း ထောက်များ၊ အဆို တော်များနှင့်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ အကုန်လုံးနီးပါးအသုံးပြုကြသည်။ သတင်းထောက်များကလည်း Facebook ပေါ်တွင် သတင်းများဖလှယ် ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြ သည်။ အဆိုတော်များကလည်း မိမိ ၏သီချင်းအသစ်များကို အရင်ကလို G-mail နှင့် Website များတွင် မ တင်တော့ဘဲ Facebook မှတစ်ဆင့် နီးစပ်ရာသူငယ်များထံသို့ ပေးပို့ဖြန့် ဝေလာကြသည်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် များသည်လည်း Facebook ပေါ် တွင် ပရိသတ်များနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပြီး Comment များကို လည်း လက်ခံကာ ပြန်လည် ဖြေကြား ပေးသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်များနှင့် အဆိုတော် များသည် မိမိနှင့်ပတ်သက်၍ ပရိသတ် အတွင်းသို့ ထွက်ရှိလာသော မဟုတ်တရမ်း သတင်းများကို Facebook တွင် mail များ၊ ဓာတ်ပုံများ နှင့်အတူ video များဖြင့်ပါ ဖြေရှင်း မှုများပြု လုပ်လာကြ သည်ကို တွေ့ရ သည်။ စာရေး ဆရာကြီး များသည် လည်း မိမိတို့နောက်ထွက်ရှိမည့် စာအုပ်၏ စာအမြည်းကို နီးစပ်ရာသူငယ် ချင်းထံသို့ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပေးပို့ခြင်းများ ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ Facebook သည် လူငယ်အများစု၏ ဖျော် ဖြေရေးကဏ္ဍတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ် ခုအဖြစ်ပါဝင်နေသည်။ Facebook တွင် သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းမိမိ ဆော့နေသောဂိမ်းများကို ဝင်ရောက် ဆော့ကစားရန်အတွက် inbite လုပ် မှုများရှိသည်ကိုလည်း သုံးစွဲသူများ ထံမှ သိရသည်။
Facebook ဝက်ဘ်ဆိုက်အပေါ် တွင် ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သော ကို သက်နိုင်၏ အမြင်
"အင်တာနက် ခေတ်စားနေ သော ယနေ့ခေတ်ကြီးတွင် လူငယ် တိုင်းလိုလို Facebook ကို အသုံး ပြုတာ ကောင်းပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေက အွန်လိုင်း သုံးပြီဆိုတာ နဲ့ G-mail နဲ့ Website အစရှိ တာတွေကို အများဆုံးသုံးကြတယ်။ Facebook ကို အသုံးပြုတာဟာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်ပြေ ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေတဲ့ သူ ငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရသော်လည်း အဲဒီကွန်ရက်ပေါ်မှာပဲ အမြဲတမ်း အချိန် ကုန်နေမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝကို ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ယခုခေတ်လူငယ်တွေက အင်တာ နက်ကို Chat ရုံလောက်ပဲ အများ ဆုံး အသုံးပြုနေကြတယ်။ အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချကြဘူး။ ဒီ Facebook အ ကောင့်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့လူကလည်း ဟားဗတ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လူငယ် တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ လူငယ် များအနေနဲ့ အတုယူသင့်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ချိန်မှာ Web Portal ကလည်း ခေတ်စားလာဦးမှာ ပဲ။ လူငယ်များအနေဖြင့် အင်တာနက် ကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် သုံးနိုင်ရန် သင်ယူပြီး Web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင် တန်းတွေတက်ထားသင့်တယ်ဟု ဆို သည်။
Facebook သုံးစွဲသူ Web Desinger တစ်ဦး၏ ပြောကြား ချက်
Facebook ကို အခုလူတော် တော်များများ သုံးလာကြတယ်။ Facebook ဝက်ဘ်ဆိုက်နည်းတူ Twitter,hi5 နှင့် Zopia အစရှိ သည်ဖြင့် လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ သုံးစွဲသူ အများစုက Facebook ကို အများဆုံး အသုံးပြုကြတယ်။ Facebook Account ရဲ့ Nickname မှာလည်း G-mail Account Username နဲ့ ဝင်ရပြီး G-talk မှာ မိမိသူငယ်ချင်း များကို Facebook ပေါ်တွင် ရှာချင် ရင်လည်း အလွယ်တကူ G-mail Account နဲ့ရှာလို့ရတဲ့အတွက် သုံး စွဲသူတွေက ပိုပြီးလက်ခံလာကြတယ်။ Hacker များကလည်း Facebook မှာ Virus File တွေပြုလုပ်ပြီး mail များ ပြန့်နေသည်ကိုလည်း တစ်ခါတစ် ရံတွေ့ရတယ်။
အရင်တလောတုန်းက Facebook အကောင့်မှာ Unknow နဲ့ Link တစ်ခုဝင်လာတယ်။ အဲဒီ Link ကို နှိပ်လိုက်တော့ ကိုယ့်ကို Comment ပေးထားတဲ့ လူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ ကိုယ့်နာမည်တွေ လျှောက်ပေါ်ကုန်တယ်။ အဲဒီလို ကိစ္စ တွေကို သုံးစွဲသူတွေကို စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ နောက်သူငယ် ချင်းတွေထံကသိရတာ Facebook အတုပေါ်နေပြီ ကြားတယ်။ အဲဒီ Facebook အတုတွေထဲကို User name နဲ့ Password ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ မိမိရဲ့ Account Password များကို သိသွားပြီး Privacy များပါပေါက်ကြား နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ကျွန်တော်က တော့ မကြုံသေးဘူး" ဟု ဆိုသည်။ Facebook ကွန်ရက်ကြီးကို ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိလူ(၁၄)ဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်းသုံး စွဲနေကြောင်း ယခင်နှစ်စစ်တမ်းအရ သိရသည်။
မိုးဇလမှ မိုးလေဝသ သတင်းများ အချိန်မီ ကြေညာနိုင်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုက် လွှင့်တင်
09:18:00 Kyaw Thu Aung No comments
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ မိုးလေဝသ သတင်း များ အချိန်မီ ထုတ်ပြန် ကြေညာနိုင် ရန်အတွက် မိုးဇလ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လွှင့်တင် ထားသည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပြီးခဲ့ သည့်မတ်လ အတွင်းက စတင်ကြည့် ရှုနိုင်ပြီး ပြည်တွင်း မိုးလေဝသနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အ လက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လွှင့်တင်ပေးထားသည်။ ပြည်တွင်း တွင် မိုးလေဝသနှင့် ပတ်သက်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် မူလက မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး မိုးဇလမှဝက်ဘ်ဆိုက် လွှင့်တင်ပြီး ချိန်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဆိုက်နှစ်ခုရှိသည်ဟု သိရသည်။ "အခုနောက်ပိုင်းက ရာသီ ဥတုအခြေအနေကမမှန်တော့ မိုးလေဝသ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုပဲ အဓိက ထားကြည့်ရ ပါတယ်။ တီဗီက ကြေညာ တာကို လည်းသတိထား ကြည့်ရပါတယ်" ဟုဆိုသည်။ မိုးလေဝသမှ လွှင့်တင်ထား သောဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ www.moezala.gov.mm ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာထွန်း လွင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ www.tunlwin.com ဖြစ်သည်။
08:46:00 Kyaw Thu Aung No comments
Aim to be the very best at everything you do-not second best.
သင် လုပ်သမျှတွင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ရည်မှန်းချက် ထားပြီး လုပ်ပာ။ ဒုတိယ အကောင်းဆုံးခန့်ကိုသာ မမုန်းပာနဲ့။
All you have to do is consciously think about what you are doing and then aim for that, the best. The secret is to be aware of what you are doing, and have some sort of benchmark where you, and only you, monitor performance. Make your goals, your aims simple and obviously attainable. Make sure you know what is, for you, best and second best.
သင် လုပ်ရမည်မှာ သင်၏ အသိစိတ်ဖြင့် သင်လုပ်လိုသည်ကို စဉ်းစားပြီး ထို ရည်မှန်းချက်ကို ဦးတည် ကြိုးပမ်းရန် ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး လုပ်ပါ။ လျှို့ဝှက်ချက်မှာ သင် လုပ်နေသည် ကို သင်သိဖို့ဖြစ်ပြီး သင့်လုပ်ရပ်ကို ကွပ်ကဲနိုင်ရန် စံအမှတ်အသား တစ်ခုခုတော့ ရှိရမည်။ သင်၏ ဦးတည်ချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များကို ရိုးစင်းအောင် ချမှတ်ပါ။ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် ချမှတ်ပါ။ သင်သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် ဒုတိယ အကောင်းဆုံးကို ခွဲခြားသိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
06:00:00 Kyaw Thu Aung No comments
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရို အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်နှင့် တရုတ် ပြည်သူ့ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့်၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက် အမျိုး သားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာကျာချင့်လင် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်း၌ လက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်။ ၎င်းသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက အာဏာလွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက် ပထမဆုံးအလည်အပတ် လာရောက်သည့် အစိုးရဧည့်သည်တော်ဖြစ်ပြီး လည်ပတ် သည့်ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးနှင့်နည်း ပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူ စာချုပ်အပါအ၀င် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ငါးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သတင်း - ရွှေယင်းမာဦး၊ ဓာတ်ပုံ - အေအက်ဖ်ပီ
ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဒေါ်ညု တပည့်များchattingထိုင်နေစဉ်
10:40:00 Kyaw Thu Aung2comments
wailinn Kira ဆိုသောFbမှမိန်းခလေးများကို အသရေဖျက်နေသော ဂျော်ကယ်
အွန်လိုင်းသုံးရင်းဆော်လေးကြောင့်ရူးပြီးကနေတဲ့ ကျော်သူ(ဝမ်းတွင်းရူး)...ဗေ..ဒိုး..ဗေ..ပက် ဗေ..ဂျိ..ဂျိ
နိုင်ငံရေးအချောင်သမားဒေါ်မာမာအေးတစ်ယောက် ဘဲဘဲ နှင့်ချက်တင်ထိုင်နေစဉ်
မိုးချီးတို့ အချောင်သမားတသိုက် ဒေါ်လာစားနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဒို့ဆီက မြန်မာတွေလို
မချက်ပါဘူး၊၊ လိုအပ်မှ ချက်တင် သုံးပါတယ်၊၊ ဒို့မြန်မာတွေကတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး၊၊
နားကြပ်ကြီးတွေ တပ်ပြီး တစ်နေကုန်
ဖင်ပူအောင်ထိုင်၊ တွေ့သမျှ ဆန့်ကျင်ဘက်(gender ) များနဲ့ချက် နေလိုက်ကြတာကို
ဟေ့..... မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ။ မြန်မာဟာ မြန်မာပြည်မှာ နေရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သေရမယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေမြေခြားကိုရောက်နေရပေမယ့် တစ်နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရမယ်။ အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် နိုင်ငံခြားသားလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကူးလေနဲ့။ ဦးသန့်
ဒေါ်ညုရဲ့ NLD logo မေမေညုက အရင်က တော့ sexyပဲ သားတို့ သမီးတို့ ရေ အင်္ဂလိပ်လောက်တော့အပျော့ပေါ့ သား တို့ အတွက် တစ်ထောင့်တစ်ည အမေ့ ဘ၀လေး...
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ မိုးလေဝသ သတင်း များ အချိန်မီ ထုတ်ပြန် ကြေညာနိုင် ရန်အတွက် မိုးဇလ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လွှင့်တင် ထားသည်ဟု ...
ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်သူ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွဲခဲ့သူ ဘုရင့်နောင်
ကမ္ဘာက သိအောင်ကျော်ကြားသည် လက်ရုံးဘုန်းရှိန်အင်အားသည် အလွန်ကြီးမားသူ ဘုရင်မြတ်တစ်ပါး နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ စတည်သည်..။ ခန့် ညားဝံ့ထည် ...
ရရင်ရမရရင်ချမဲ့ ဒေါ်လာစား Nge Naing
Nge Naing ဟုဆိုလိုက်လျှင် ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံတော်တော်များများ အထူးပင်လေးစားကြသော မမဆိုတာလူတိုင်းသိနေကြပါပီ။ သူမ၏နိုင်ငံရေးခံယူချက် မှာ&quo...
စိုင်းသိန်းဝင်း နဲ့ DVB သတင်းထောက် စောလဲ့နန္ဒာ အကြေင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
ခမောက်စိုင်းသိန်းဝင်း Facebook Ko Iron မှ ကြာကူလီစိုင်းသိန်းဝင်းမေးလ်တခုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဒီဗွီဘီမှ ယောင်ဝါးဝါးသတ...
ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဒေါ်ညု တပည့်များchattingထိုင်နေ...
မိုးဇလမှ မိုးလေဝသ သတင်းများ အချိန်မီ ကြေညာနိုင်ရန်...
လူမှုဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ သံ...
၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ စာအုပ်...ဖတ်ပ...
Copyright © 2011 ဘာလဲဟဲ့ ဒီမိုကရေစီ | Powered by Blogger